သီးလေးသီးပြီးတော့ နှင်းဆီအဖွဲ့သားများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သီးလေးသီးပြီးတော့ နှင်းဆီအဖွဲ့သားများ
Posted by အာဂ on Nov 22, 2010 in Creative Writing, Cultures, Events/Fundraise, Myanma News, News | 19 comments
နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ က သုဝဏ္ဏအားကစားရုံမှာပြသခဲ့တဲ့ ထာဝရ နှင်းဆီ အငြိမ့်ပွဲက ပရိသတ် အကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အခြား အငြိမ့်များလိုမဖြစ်ပဲ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပြက်လုံးတွေကို အခြေခံပြီး ပြက်သွားလို့ပရိသတ်များအကြိုက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ထာဝရနှင်းဆီ အငြိမ့်အဖွဲကို ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)က စီစဉ်တာဖြစ်ပြီး လူရွင်တော်များအနေဖြင့် နေတိုး၊ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ရဲလေး၊ထွန်းထွန်း နဲ့ မိုးမိုးတို့ ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။
ဒီနှင်းဆီအဖွဲသားများရဲ့ အငြိမ့်ဟာ ပြည်တွင်းမှာ နောက်ဆုံးအကြိမ်ကပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး.။ အစိုးရကို သရော်တိုက်ခိုက်တဲ့ ပြက်လုံးတွေကြောင့်အတော်လေးကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အငြိမ့်ထဲမှာ ပါတဲ့ ပြက်လုံးအချို့ကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် လူရွင်တော်အချင်းချင်း ပဟေဌိ လုပ်တဲ့အခါနောက်ဆုံး မေးခွန်း အဖြစ် တရိစ္ဆာတွေကို အများဆုံးရှိတဲ့ နေရာ၊ တရိစ္ဆာ မျိုးစုံထား ရှိ တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲ သိတဲ့လူဖြေလို့ လူရွင်တော်တစ်ယောက်ကမေးတဲ့အခါ အခြားလူရွင်တော်တွေက ငါသိတယ်..ဟိုဟာမဟုတ်လား..ဆိုပြီး တစ်ယောက်မှ မဖြေခဲ့ပေ။ ဒါနဲ့ လူရွှင်တော်တစ်ယောက်က ဒါဆိုပရိသတ်ကြီးသိမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီး ပရိသတ်ကိုမေးတော့ ပရိသတ်က သံပြိုင်ပါပဲ နေပြည်တော်လို့ ဖြေခဲ့ကျပါတယ်။ အလာတူ ပြက်လုံးတွေအပြင် ၂၀၁၀ေ၇ွးကောက်ပွဲကို သရော်သည့်ပျက်လုံးများ ၊ ကြံဖွက်များကို နိုပ်ကွပ် သည့် ပြက်လုံးများ။ အပါအ၀င် အစိုးရပိုင် ဦးပိုင်စသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို သရော်သည့်ပြတ်လုံးများ။ မီးမလာသည့်အကြောင်းကို ပြက်သည့်ပြက်လုံးများ။ တရားမမျှတမှု ကိုပြက်သည့် ပျက်လုံးများနဲ့ ပရိသတ် လက်ခုတ် သံတွေ အတော်ကလေးကို ညံ့ ခဲ့ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော သီးလေးသီး ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ နှင်းဆီ အဖွဲ့သားတွေက ပြည်သူတွေနဲ့ တသားတည်းကျခဲ့တဲ့အတွက် ဒီမှာနေပြီး အဲဒီလိုပြောင်မြောက်တဲ့ ပြက်လုံးတွေပြက်ခဲ့တဲ့ မောင်မျိုးမင်းနဲ့ နှင်းဆီ ၀ိုင်းတော်သားများအားလုံးကိုလေးစားမိပါတယ်။
ကျေးဇူးတင် လေးစား ပါတယ် နှင်းဆီအဖွဲ့သားများ ။
သီးလေးသီးလို အပြင်ရောက်မသွားပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ် ။U
အင်း ..ဟုတ်တယ် nwl တို့လဲသွားကြည့်ဖြစ်တယ် ပရိသတ်တွေကလဲ ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ လာကြည့်ကြတယ်ထင်ပါတယ်
ရုံပြည့်ရုံလျှံပါပဲ ..ပြတ်လုံးတွေကလဲ တော်တော်ထိထိမိမိနဲ့ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ် ..
ကျားကြီးတွေ မလို ၀တ်လို့ အမြင်ကတ်ပြီး ၀ိုင်းပြောလို့ နောက်ဆုံး ပွဲမှာ လူတွေ အကြိုက် လုပ်ပေးတာများလား မသိဘူး။
အစိုးရကပဲ အယုံသွင်းတဲ့လှည့်ကွက်များဖြစ်နေမလားပဲ ။
နှစ်သစ်နှင်းဆီ ကျနော်လဲကြိုက်တယ် အဲထဲမှာလဲ ဆသရ နဲ့တခြားအဖွဲ့ အစည်းတွေကို ဖဲ့ထားကြသေးတယ် အာရုံဦး အတွက်အကြွေးဆပ်ကြတာလား ???????
၈၈ အရေးအခင်းကို ပျက်ရယ်ပြုတဲ့သူမှန်သမျှ လူမဟုတ်ဘူး လို့ပဲထင်တယ်။
ကျုပ်တို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် နောင်တော်တွေက အနစ်နာခံခဲ့ရတယ်…
အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားက ကောင်းစားသွားတယ်။
တကယ်ဆို သင်းတို့ကောင်းစားလာဘို့အရေး …
မစွန့်ဘဲ စားရသူတွေ ၀သွားတာပေ့ါ
ကောင်းပါတယ်ဗျာ အနုပညာရှင်တွေလည်းတတပ်တအား တိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်ပေးနေတာ.. ဒီလို တိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်၊လစ်ဟာချက်တွေကို အုပ်ချုပ်သူတွေဘက်က အကောင်းမြင်သဘောနဲ့ ကြည့်ပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်အတွက်ဝမ်းသာစရာပါဘဲ.. အကောင်းမမြင်ဘဲအဆိုးလို့ သာမြင်နေရင်တော့ ဇာဂနာအတွက် အထဲမှာ အဖော်အတော်များများရတော့မယ်..
…. နွားအဖ ရဲ့လှည့်ကွက်တွေလို့ပဲထင်ပါတယ်….
မဟုတ်ယင် ဒီကောင်တွေ အဲ့လောက်အခွက်မပြောင်ရဲပါဘူး… ခွက်ပျောက်မှာစိုးလို့လေ…
အလကား လာရောနေတာနေမှာပါ… ကျွန်တော်ကတော့ … ဦးကျော်သူ နဲ့ ဦးဇာဂနာတို့ကိုပဲ လေးစားတယ်…
ညီလေးရေ ကိုယ်ပြောချင်တာပြောချင်ရင် သူများပြောချင်တာကိုလဲ နားထောင်ပေးရတယ်။
သီးလေးသီးလို အပြင်ရောက်မသွားပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ် ။
ဟုတ်ပါတယ် နှင်းဆီအငြိမ့်ကိုကြည့်ရင် ရသတစ်မျိုးမျိုးကိုခံစားရစမြဲပါ ။ နောက်ဆုံးကတာဆိုတော့ နှမြောတော့နှမြောပါရဲ့။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပျက်လုံးနဲ့ ပြည်သူတွေကို နှစ်သိမ့်တယ်ပဲထင်မိပါတယ်။
rker ရဲ့ မှတ်ချက်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
နှင်းဆီအငြိမ့်က.. အဖွဲ့ သားတွေ..ယူအက်စ်ရောက်နေတုံးမို့ … သူတို့သတင်း.. အမှတ်တရ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ..။
သူကြီးက သူတို့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေလဲ တင်ပေးပါဦး (သတင်းရော အတင်းပါပေါ့)
ဒီလို ခေတ်နဲ့ စံနစ်ကို ထောက်ပြတဲ့ ပျက်လုံးမျိုးတွေ လူရွှင်တော် စစ်စစ်တွေဆီက ထွက်မလာနိုင်တော့တာ လူရွှင်တော်တွေ ညံ့လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုခုများ လွဲချော်သွားလို့ အနုပညာ လုပ်ခွင့် အပိတ်ခံလိုက်ရရင် နဂိုကမှ ကျပ်တည်းနေတဲ့ စားဝတ်နေရေး ထိခိုက်မှာ စိုးရတဲ့အတွက် မလုပ်ရဲကြတာလို့ ထင်ပါတယ်။ လူရွှင်တော်စစ်စစ်တွေ မလုပ်ရဲလို့ ဖြစ်လာတဲ့ ကွက်လပ်ကို မင်းသားတွေက ဖြည့်ပေးတာ ကို ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုဆိုပါတယ်။ ဆရာနေ၀င်းမြင့် အောင်လံမှာ ဟောခဲ့သလိုပေါ့၊ ”ကျွန်တော်တို့က တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကောင်းဖို့ အတွက် ပြောတာ မခံနိုင်လဲသေပေါ့”။
နှင်းဆီအဖွဲ့ကို ကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ် .. သူတို့တွေအပိတ်မခံရဖို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်..